Villa na ụlọ nwere akụkụ akụkụ nke nrụgide hydraulic itule kpo oku - Zhejiang Xinfan HVAC Intelligent Control Co., Ltd.
Nkọwa: A na-ejikarị eme ihe maka ikpo ọkụ buru ibu, Villas na ụlọ kpo oku, usoro mmiri ọkụ ụlọ, nke ọma dozie ụkọ na ikpo ọkụ nke akwa akwa akwa, ikpo ọkụ n'ala, mmiri ọkụ ụlọ, yana nkesa na-enweghị isi nke okpomọkụ na nrụgide mmiri na ndị ọzọ. okwu.
1.Using n'ala isi iyi okpomọkụ mgbapụta dị ka okpomọkụ isi iyi na oyi, na-eji nke ọma na-ekpo ọkụ nke n'okpuruala mmiri na okpomọkụ mgbapụta onye ọbịa, site hydraulic itule modul, hierarchical, ele mmadụ anya n'ihu nrụgide ikesa dị iche iche okpomọkụ na eruba ina, ezi uche na na-ebunye ọkụ ahụ n'ebe a na-ekpo ọkụ na ụlọ ọ bụla na ụlọ, dị ka ebe a na-ekpo ọkụ, akwa akwa akwa, ikpo ọkụ n'ala, mmiri ọkụ ụlọ.
2.The nnwere onwe nke okpomọkụ na oge na-arụ ọrụ, centralized njikwa na ịrụ ọrụ nke ọma management, izute mkpa nke dị iche iche kpo oku chọrọ, nke na-edozi ụkọ nke okpomọkụ dị iche na mmiri nrụgide na nnukwu-sized Villas' kpo oku na nnukwu-ebe 'ekpo ọkụ.
3.The dum echiche nke usoro imewe nwere elu arụmọrụ, ọkaibe, elu nche, elu kwụsie ike nke teknụzụ connotation, nke na-etinye ọhụrụ technology n'ime ọ bụla njikọ nke usoro na nweta iji mmetụta nke n'enweghị, ike-azọpụta na nkasi obi.
4.Better na nkwado nke ike, nchebe gburugburu ebe obibi na-enweghị carbon na 20% na-azọpụta ike, na-eme ka njikwa ike dịkwuo mma.Ya mere ịkwalite ọkwa nke ndụ ndụ ndụ na-azọpụta ike, bụ kpakpando ọhụrụ n'etiti ngwaahịa ndụ ndụ ndụ.
Na-akwado usoro ngwọta
Usoro ngwakọta mmiri
Panel, onye na-eme ihe ọkụ eletrik